Izindaba - Ungayenza kanjani inkampani yakho ithuthuke kancane ngokuncintisana okuyishumi okuphezulu
Ukuze noma iyiphi inkampani ithuthuke ngokusimeme nangokuzinza, kufanele ihlakulele ukuncintisana kwayo okuyisisekelo.
Ukuncintisana okuyisisekelo kwebhizinisi ekuqaleni kubonakala kumakhono athile.Ukuncintisana okuyinhloko kwebhizinisi kungahle kuhlukaniswe kokuqukethwe okuyishumi ngokususelwa ekuhlaziyweni kokuboniswa kwalo okuthile, okubizwa ngokuthi ukuncintisana okuyishumi okuphezulu.
(1) Ukuncintisana kokwenza izinqumo.
Lolu hlobo lokuncintisana yikhono lebhizinisi lokukhomba izingibe zentuthuko namathuba ezimakethe, kanye nokuphendula ekuguqukeni kwemvelo ngesikhathi esifanele nangempumelelo. Ngaphandle kwalokhu kuncintisana, ukuncintisana okuyisisekelo kuzoba yisidumbu. Ukuncintisana kokwenza izinqumo namandla okwenza izinhlangano ezinkampanini zisebudlelwaneni obufanayo.
(2) Ukuncintisana kwenhlangano.
Ukuncintisana kwemakethe yamabhizinisi kufanele ekugcineni kwenziwe ngokusebenzisa izinhlangano zamabhizinisi. Kuphela lapho kuqinisekisiwe ukuthi ukufezekiswa kwezinhloso zebhizinisi kuqediwe, abantu benza konke, futhi bazi izindinganiso zokwenza kahle, lapho izinzuzo ezakhiwe ukuncintisana kokwenza izinqumo zingaphumeleli. Ngaphezu kwalokho, amandla okwenza izinqumo namandla okwenza amabhizinisi nawo asekelwe kuwo.
(3) Ukuncintisana kwabasebenzi.
Othile kufanele anakekele izindaba ezinkulu nezincane zenhlangano yebhizinisi. Kuphela lapho abasebenzi bekwazi ngokwanele, bezimisele ukwenza umsebenzi omuhle, futhi benokubekezela nokuzidela, lapho bangenza konke.
(4) Inqubo yokuncintisana.
Inqubo iyisamba sezindlela ngazinye zokwenza izinto ezinhlanganweni ezahlukahlukene nasezindimeni zenkampani. Ikhawulela ngqo ukusebenza ngempumelelo nokusebenza kwenhlangano yebhizinisi.
(5) Ukuncintisana ngamasiko.
Ukuncintisana kwamasiko kungamandla okuhlanganisa akhiwa amanani afanayo, izindlela ezivamile zokucabanga nezindlela ezivamile zokwenza izinto. Idlalela ngqo indima yokuxhumanisa ukusebenza kwenhlangano yebhizinisi nokuhlanganisa izinsizakusebenza zayo zangaphakathi nezangaphandle.
(6) Ukuncintisana komkhiqizo.
Imikhiqizo idinga ukuthi isuselwe kukhwalithi, kepha ikhwalithi iyodwa ayinakuba uphawu. Kukhombisa isiko lenkampani eliqinile ezingqondweni zomphakathi. Ngakho-ke, futhi yakha ngqo ikhono lebhizinisi lokuhlanganisa izinsizakusebenza zangaphakathi nezangaphandle.
(7) Ukuncintisana kwesiteshi.
Uma ibhizinisi lifuna ukwenza imali, lenze inzuzo, futhi lithuthuke, kufanele libe namakhasimende anele ukwamukela imikhiqizo nezinsizakalo zalo.
(8) Ukuncintisana kwentengo.
Kushibhile kungenye yamanani ayisishiyagalombili ​​ukuthi amakhasimende afuna, futhi awekho amakhasimende anikelayo'Ngikhathalela intengo. Lapho ikhwalithi nethonya lomkhiqizo zilingana, inzuzo yamanani ukuncintisana.
(9) Ukuncintisana kozakwethu.
Ngokuthuthuka komphakathi wesintu namuhla, izinsuku lapho konke kungaceli usizo futhi zenze konke emhlabeni seziyinto yesikhathi esedlule. Ukuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo ezengeza kakhulu nokweneliseka kwenani, sizophinde futhi sisungule umfelandawonye wamasu.
(10) Ukuncintisana okusha kwezinto zokuhlunga.
Kufanele sibe nezinto ezintsha eziqhubekayo kuqala. Ubani ongaqhubeka nokudala lobu buqili kuqala, ongahlulwa kulo mncintiswano wemakethe. Ngakho-ke, akukhona okuqukethwe okubalulekile kokusekelwa kwebhizinisi kuphela, kodwa futhi nokuqukethwe okubalulekile okwenziwa kwamabhizinisi.
Lokhu kuncintisana okukhulu okuyishumi, sekukonke, kufakwe njengokuncintisana okuyinhloko kwebhizinisi. Ukuhlaziya ngokombono wekhono lokuhlanganisa izinsizakusebenza zebhizinisi, ukuntuleka noma ukuncishiswa kwanoma iyiphi yalezi zici eziyishumi zokuncintisana kuzoholela ngqo ekwehleni kwaleli khono, okungukuthi, ukwehla kokuncintisana okuyinhloko kwebhizinisi.